किन च्यानल सुरुङ त्यसैले युरोप लागि महत्वपूर्ण छ? | एक ट्रेन सेव
घर > यात्रा युरोप > किन च्यानल सुरुङ त्यसैले युरोप लागि महत्वपूर्ण छ?
लामो छैन च्यानल सुरुङ रूपमा धेरै Eurostar सुरुङ खुलेको रूपमा उल्लेख पछि 1994, यो आधुनिक विश्व को सात आश्चर्य मध्ये एक स्वराङ्कित थियो. नागरिक ईन्जिनियर को अमेरिकी समाज अनुसार, कि शीर्षक राम्रो योग्य थियो. यो बीचमा च्यानल सुरुङ राख्न वास्तु विचित्रताहरू साम्राज्य राज्य भवन र CN टावर जस्तै.
को Eurostar सुरुङ पक्कै एक आश्चर्य र निर्माण को एक विशाल कमाल छ. तर यो किन युरोप लागि यति महत्त्वपूर्ण छ? के यसको प्रभाव थियो, र जो शहर यात्री यसलाई प्रयोग गरेर पुग्न सक्दैन? का च्यानल सुरुङ महत्त्व नियालेर गरौं:
इतिहास Eurostar सुरुङ को
च्यानल सुरुङ निर्माण सुरु तापनि 1988, भन्ने विचार नयाँ थियो होइन. पनि नेपोलियन को विचार संग toyed इङ्गल्याण्ड र फ्रान्स जडान एक टनेल मार्फत. उहाँलाई अघि, फ्रान्सेली इन्जिनियर अल्बर्ट Mathieu-Favier पहिलो यस्तो टनेल प्रस्तावित 1802. आफ्नो अवधारणा बाटो साथ एक कृत्रिम द्वीप समावेश, घोडा-परिवर्तन हुँदै रूपमा स्टेशन. तथापि, सबैभन्दा योजना सम्म द्वितीय विश्व युद्ध पछि त्यागेर थिए.
मा 1987, बेलायत र फ्रान्स को parliaments बल्ल च्यानल सुरुङ निर्माण गर्न सहमत. एक सेवा टनेल रूपमा दुई रेल यातायात र एक - परियोजना तीन सुरुङको निर्माण समावेश. विकास छ वर्ष लाग्यो, $7.2 अरब, एघार नीरस मिसिन, र 13,000 कामदारहरूको. यसको लागत आजको बराबर छ $12 अरब.
च्यानल सुरुङ तथ्य
च्यानल सुरुङ छ 31.35 माइल लामो, एक पानी खण्ड संग 23.5 माइल. यो चल्छ कि संसारमा सबैभन्दा व्यापक Undersea खण्ड छ 250 यसको सबै भन्दा कम बिन्दुमा समुद्र ओछ्यानमा तल फिट. सुरुङ जडान बेलायतमा Folkestone Coquelles संग, मा pas-डे-कलैस फ्रान्स. यो डोभर को Strait मा अंग्रेजी च्यानल मुनि चल्छ.
के च्यानल सुरुङ विशेष बनाउँछ यसलाई ग्रेट ब्रिटेन र मुख्य भूमि युरोप को मात्र कनेक्टर छ कि छ. र साथ उच्च गतिको रेल आज उपलब्ध, यो हो मुख्य भूमि युरोप बेलायत बाट यात्रा गर्न सबैभन्दा छिटो तरिका को एक.
च्यानल सुरुङ खोल्दै को प्रभाव
को Eurostar सुरुङ रेलवे बनाउन एक भारी भूमिका खेलेका छ सुलभ यात्रा फेरी पनि. तिनीहरूले विशेष गरी बेलायत मा कदर, यो बिना युरोप यात्रा गर्न सम्भव रूपमा उडान. यो यात्री यात्रा को लागत कम गर्न मद्दत गर्छ, साथै आफ्नो कार्बन पदचाप रूपमा. Eurostar रेल emits द्वारा लन्डन बाट यात्रा गर्ने पेरिस गर्न अनुमान 90% कम हरितगृह ग्यास विमान लिएर भन्दा उत्सर्जन.
च्यानल सुरुङ बारेमा सबै भन्दा राम्रो भाग प्रमुख आफ्नो जडान युरोपेली रेलवे सञ्जाल. यसलाई प्रयोग गरेर, तपाईं बेलायत बाट सबैभन्दा प्रमुख युरोपेली शहर प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ. र गरेको जस्तै बेलायत गरेको प्रमुख शहर पुग्न सम्भव पनि छ भूल छैन गरौं लन्डन उडान बिना. यो एक किफायती छ, छिटो र यात्रा गर्न सुरक्षित तरिका.
लन्डन देखि लियोन Highsped ट्रेन
च्यानल सुरुङ तपाईं fascinates भने, लिन एक सवारी यसलाई माध्यम! यो यात्रा सुंदर हुन सक्छ, तर यसको अपील यसको सुविधा मा निहित. तपाईं वा बेलायत मा शहर देखि यात्रा गर्न आवश्यक छ भने, तपाईंको रेल टिकट बुक आज!
तपाईं आफ्नो साइट मा हाम्रो ब्लग पोस्ट इम्बेड गर्न चाहनुहुन्छ, तपाईँ या त हाम्रो फोटो र पाठ लिन र बस सक्नुहुन्छ यो ब्लग पोस्ट एउटा लिङ्क हामीलाई क्रेडिट दिन, वा यहाँ क्लिक: https://embed.ly/code?url=https://www.saveatrain.com/blog/channel-tunnel-europe/- (को एम्बेड कोड हेर्न एक सानो तल स्क्रोल)
#च्यानलटनेल #traveleurope europetravel eurostar eurotrip लन्डन longtrainjourneys trainjourney Tranride रेल सुझावहरू रेल यात्रा ट्रेन यात्रा सल्लाह travelfrance